प्रवेसिका परिक्षामा जोशीका दुईवटा प्रमाणपत्र सिम्वोल नं. भने एउटै-NepalKanoon.com
प्रवेसिका परिक्षामा जोशीका दुईवटा प्रमाणपत्र सिम्वोल नं. भने एउटै
काठमाडौं: विगतमा प्रधानन्यायधिस माथि संसदिय सुनुवाई कै दिन सुनुवाई समाप्त र सुनुवाईको परिणाम समेत आउने गरेकोमा यसपटकको सुनुवाई भएको दिन परिणाम सार्वजनिक नगरी तिन पटक सम्म बैठक स्थगित भएको छ । समितिको अर्को बैठक यही साउन १६ गते दिउँसो साढे ३ बजे बस्ने गरि सोमवार पनि निर्णय विनानै स्थगित गरिएको छ ।
जोशी संसदीय सुनुवाई पुर्वनै विवादमा तानिएका थिए । उनको बिषयमा किर्ते गरि प्रमाण पत्र वनाई सेवा प्रवेस गरि प्रधान न्यायधिस सम्म भएको आरोप छ र अन्य मुद्दा फैसलाका र समितिका प्रश्नका उत्तरको बिषयमा पनी समतिकिो असन्तुष्टि रहेको छ । सँगै सोमबार जोहीले सन्चार माध्ययममा बोलेका कुरा थप घ्युमा आगो थपेको छ । आफुलाई समितिले कठघरामा उभ्याएको भन्दै असन्तोसजनक अभिव्यक्ति जोशीले दिएका थिए ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशी काठमाण्डौमा रहे पनि विरगन्जको राष्ट्रिय विद्यापीठबाट २०२९ सालमा तृतयि श्रेणीमा प्रवेसीका पास गरेको प्रमाणपत्र पेश गरेका थिए । पुर्व प्रधानन्यायधिस गोपाल पराजुलीले पनि सोही विद्यालयबाट जोशी सँगै प्रवेसीका पास गरेको प्रमाणपत्र पेश गरेका थिए । एउटै विद्यालय र एउटै व्याजमा अध्ययनरत जोशीको ११७ र पराजुलीको सिम्वोल नंम्वर भने ३६६७ रहँनुले थप प्रश्न चिन्न खडा गरेको हो ।
त्यसै गरि जोशीले नेपाल ल क्याम्पसबाट आइएल पास गरेको प्रमाणपत्रमा उनले प्रवेसिका परिक्षा नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठबाट नभई विजय मेमोरीयल स्कुलबाट पास गरेको उल्लेख गरेका छन । संयोगवस विजय मेमोरीयल स्कुलको जोशीको सिम्वोल नंम्वर पनि ३६६७ नै रहेको छ । पुर्व प्रधानन्यायधिस गोपाल पराजुली अन्तत प्रमाण्पत्र विवादकै कारण वर्खास्त भएका थिए भने सोही लाईनमा जोही पनि संसदिय सुनुवाई समितीबाट अनुमोदन हुने सम्भावना क्षीण बनेको छ । प्रमाणपत्र विवादकै कारण पराजुलीको वहिगमन सम्गै जोशीको हकमा समेत ठुलो प्रश्न चिन्न खडा भएको छ ।
यसरी न्यापालीका जस्तो गरिमामय पदमा जागीर खानकै लागि न्यायमुर्ति जस्तो व्यक्तिले सरकारी कागजात किर्ते गर्नुले समग्र न्यापालीकाकोनै साखमा प्रश्न चिन्न खडा भएको छ । यस्ता गैरकानूनी कार्यको अन्त्य गर्दै न्यापालीकालाई जवाफदेहि वनाँउदै न्याय र कानूनका मान्यता र सिद्धान्तहरुलाई शक्ती पृथकीकरण र सन्तुलनको मान्यतालाई व्यवस्थित गर्दै जनमुखी न्यायका लागि अहिलेको सुनुवाई समितीले यस्तो कदम चालेको उच्च सरकारी स्रोतले बताएको छ ।